Dare Rinorasa Mhosva Yanga Ichipomerwa VaMangoma
Chikumi 28, 2011
Gurukota rezvemhando dzemoto, VaElton Mangoma, vawanikwa vasina mhosva nedare repamusoro panyaya yavanga vachipomerwa yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pakutengwa kwakaitwa mafuta kubva kune imwe kambani yekuSouth Africa muna Ndira wegore rino.
Vachitura mutongo wavo panyaya iyi, mutongi wedare repamusoro, VaChinembiri Bhunu, vati dare harina kupa humbowo hune musoro hunoratidza kuti VaMangoma vane mhosva yavakapara.
VaBhunu vati kambani iri pasi pe Noczim, yePetrotrade, yaive isiri kambani inotenga mafuta yakamirira hurumende zviri pamutemo panguva yakanyorerwa mukuru mukuru wekambani iyi, Va Griefshaw Revanewako, tsamba naVaMangoma yekuti vatenge mamiriyoni mashanu edhiziri kubva kukambani yekuSouth Africa, yeNooa Petroleum, pasina kuendwa kutenda bhodhi.
VaBhunu vati Va Revanewako ndivo vaifanira kunyorera boka re state procurement vachitsanangura kuti sei mafuta aya akatengwa pasina kuendwa kutenda bhodhi sezvinodiwa nemutemo.
Va Bhunu vati mutemo we procurement act unobvumidza kuti mafuta atengwe pasina kuendwa kutenda bhodhi chero pachizotsanangurwa mumashure ku state procurement board. Vati zvinoshamisa dare kuti munyori webazi rezvemhando dzemoto, Va Justin Mupamhanga, pamwe nemukuru anoona nezvekutengwa kwemafuta mubazi iri, VaMorgan Mudzinganyama, vanga vasingazive izvi.
Vaenderera mberi vachiti munguva yakatengwa mafuta aya, nyika yakanga yakatarisana nedambudziko rakakura kwazvo rekushaikwa kwemafuta vachiti VaMangoma vakagona basa chose vachiedza kupedza dambudziko iri nechimbichimbi sezvo mafuta akanga asara munyika akanga asingakwanire nyika kana kwezuva rimwe chete zvaro.
VaBhunu vati hapana humbowo hwakasvitswa kudare nehurumende hunoratidza kuti VaMangoma vaiita zvehuwori nekutenga mafuta aya kukambani yeNooa Petroleum sezvo paive pasina kana imwe kambani imwe cheteyo zvayo yaive nemafuta kumakambani aiwanzositengwa mafuta nehurumende.
VaBhunu pavapedza kutura mutongo uyu, vanhu vanga vauya kuzonzwa mutongo uyu varova mawoko zvakaorara uye vamwe vatanga kushevedzera kuti "Zanu PF yapererwa".
VaMangoma vaudza vatori venhau mushure mekuturwa kwemutongo uyu kuti vafara nemabatirwo aitwa nyaya iyi nedare. VaMangoma vati kuwanikwa kwavaitwa vasina mhosva kunoburitsa pachena kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
VaMangoma vane imwe nyaya zvakare yakatarisirwa kutanga kutongwa mudare mwedzi unouya yakada kufanana neyavanga vachipomerwa iyi.
VaMangoma vanonzi vakakonzeresa kuti kambani yemagetsi ye Zesa itenge mamita emagetsi pasina kuendwa kutenda. Asi Va Mangoma vari kuramba nyaya yavari kupomerwa iyi.